Tajaajjilli yaala Baqaqsanii yaaluu mormaa olii tola ooltootan Hospitaala Yekaatiit 12tiitti kennamaa jira – Fana Broadcasting Corporate
Tajaajjilli yaala Baqaqsanii yaaluu mormaa olii tola ooltootan Hospitaala Yekaatiit 12tiitti kennamaa jira
Finfinnee, Sadaasa 1, 2012(FBC) – Koolleejjii Meedikaalaa Hospitaala Yekaatiit 12tiitti tajaajilli yaala fayyaa baqaqsanii yaaluu mormaa olii tola ooltoota dhalootaan Ityoophiyaa fi alaan duulaan kennamee jira.
Hospitaala Meedikaala Yekaatiit 12tti yaallamtoonni yaala baqaqsanii yaaluu mormaa olii hammaa ol baayyachuu isaaniin beellama yeroo dheeraaf yemmuu gagga’aman ni muul’ata.
Rakkoo kana hanga tokko furuuf jecha waggoottaan darban ogeeyyiin fayyaa alaa dhalootaan Ityoophiyaa ta’an yaala baqaqsanii yaaluu mormaa olii kana tola ooltummaa ooluun deddeebii yaallamtoota irra gahu sadarkaa olaanaan hir’isuu keessatti qooda guddaa bahaniiru.
Haaluma kanaan Hospitaalichaatti yaallamtoota yaala baqaqsanii yaaluu eeggachaa turan yaaluuf ogeeyyiin fayyaa alaa fi dhalattoonni Ityoophiyaa biyya swiidinii dhufan Sadaasa 1,2012 irraa eegalee akkuma barbaachisaa ta’ee argameetti guyyoota 15niif duulan yaala taassisuu eegalaniiru.
Duula kanaan yaallamtoonni 300 ol ta’an tajaajila ni argatu jedhamee eeggama.
Duulli taasiifamaa jiru hanqina meeshaalee fi ogeeyyii fayyaa yaala walxaxaa Hospitaalichi qabu furuu fi muuxxannoo ogummaa dabrsuu keessatti iddoo olaanaa ni qabaata jedhame.
Jilli tola ooltoota yaala fayyaa kun waggoottaan darban meeshaalee yaala baqaqsanii yaaluu murteessaa ta’an deeggarsaan laatuu isaa ibsameera.